I-Villa Szalamandra Mátraalmás - i-Tisztás - I-Airbnb
I-Villa Szalamandra Mátraalmás - i-Tisztás
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Viktor
U-Viktor Ungumbungazi ovelele
I-Villa Szalamandra inikeza isikhathi esimnandi sokuphumula somndeni omkhulu noma inkampani enkulu nabangani. I-villa (230sqm) , kanye nengadi yemvelo (5000sqm) phakathi nendawo nje ye-Mátraalmás inikeza amathuba ahlukahlukene.Letha wonke umndeni kule ndawo enhle enendawo eningi yokuzijabulisa.
Inhliziyo ye-Villa Szalamandra iyindawo enkulu evamile, i-panorama sauna enhle entabeni i-Tatra, kanye ne-jakuzzi yobhavu ophumuzayo ophumuzayo obheke entabeni yase-Galya. Kufanele futhi ukubalula ukuzijabulisa kwangaphakathi!
Imibhede elala umuntu oyedwa engu-2, 1 usofa
ubusuku obungu-7 e- Szuha
UViktor Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: EG21004421